အိမ်သုံးမီတာခ …ဘယ်လောက်ကျမလဲ …တွက်လို့ ရပြီ – ရှအေလငျး
အိမ် သုံး မီ တာ ခ ဘယ်လောက်ကျမလဲ တွက်လို့ ရပြီ
မီးပူ – ၁၂၀၀ ဝပ် =၅.၂ အမ်ပီယာ,
မီးဖို-၁၆၀၀ ဝပ်=၇ အမ်ပီယာ ,
တီဗွီ + စလောင်းစက် – ၄၀၀ ဝပ်- ၁.၈ အမ်ပီယာ,
အဝတ်လျှော်စက် -၂၀၀ ဝပ်.. ၀.၉ အမ်ပီယာ,
ရေမော်တာ – ၁၂၀၀ ဝပ်…. ၅.၂ အမ်ပီယာ
အဲကွန်း – ၁၂၀၀ ဝပ်….၅.၂ အမ်ပီယာ,
မီးသီး + မီးချောင်း – ၁၅၀ ဝပ်… ၀.၇ အမ်ပီယာ,
အြ ခား အ သုံး အဆောင်များ…၅ အမ်ပီယာ..- ၃၁ အမ်ပီယာ
အိမ် သုံး မီ တာ တစ်လုံး၏ ခံနိုင်ရည် ဝန်အားသည် (5/30) Amp. (10/30) Amp. အများဆုံး (၃၀) အမ်ပီယာထိ အသုံးခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အထက်ပါပစ္စည်းများအားတစ်ပြိုင်နက် သုံးစွဲနေပါက( တစ်နာရီလျှင်) မီတာယူနစ်တက်နူန်း
kilo watt per hour (Kw/hr)VI = W သည် 230v x 30A = 6900 Watt=7Kw =7Unit. ဖြစ်နေ၍ တစ်ရက်လုံး ပစ္စည်းပြုံသုံးချိန် တစ်နာရီဆိုကတစ်ရက်လျှင် (၇)ယူနစ်ဖြင့်တစ်လစာယူနစ်(၂၂၀) ဝန်းကျင်ဖြစ်မည်။
သာမန်မိသားစုတစ်လသုံးမီတာခ = ၅၅၀ယူနစ် အလွှာမခွဲ တစ်ယူနစ် (၃၅) ကျပ်ဖြင့် တစ်လနှစ်သောင်းခန့်ကျပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထမီးလင်းရေးနယ်ပယ် တစ်ယူနစ်(၃၅၀)ကျ ပ်ဖြင့်သုံးကတစ်လ ကျပ်နှစ်သိန်းခန့် ကျမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ အိမ်သုံးမီတာအားမည်သည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသုံးနိုင်ပြီးဝန်အားခံနိုင်ရည်အမ်ပီယာ (သိုဝပ်အားအခြေအနေ မည်မျှထိရှိနိုင်လဲဟု သိချင်သူများအား ရည်ရွယ်ရေးသားပါသည်။
ယခင်ကတပ်ထားသော(Analog) နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် မီတာတံဆိပ်ဟောင်းများတွင် တောက်လျှောက်သုံး အမ်ပီယာ(၃၀) ထက်ကျော်သုံးလည်း ဝန်ပိုဒဏ်ကြေးရိုက်ခံရမူမရှိပါ၊ အခန့် မသင့်က မီတာလောင်မှုများသာ ဖြစ်တတ်သည်။
ယခု(၂၀၁၈)ခုနှစ် ဧပြီလမှစတင်အသစ်ထုတ်ပေးသော ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာအသစ်(ပုံပါတံဆိပ်)သည်သတ်မှတ်ဝန်အား(၃၀)အမ်ပီယာကိုတောက်လျှောက် တစ်နာရီထက် အချိန်ပိုမိုသုံးပါကယင်းမီတာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားသောရုံးထိုင်ဆာဗာကွန်ပျူတာတွင်(Overload Error) ပြပြီးသတ်မှတ်ဒဏ်ကြေး ရိုက်ခံရမည် ဖြစ်​သည်​။
မိမိအိမ် လစဉ် ယူနစ်တွက်ချက်တတ်ပြီး…မီတာခ အနည်းအများ ချိန်ဆနိုင်ကြပါစေ။Thi Ha🇲🇲
မီးပူ – ၁၂၀၀ ဝပျ =၅.၂ အမျပီယာ,
မီးဖို-၁၆၀၀ ဝပျ=၇ အမျပီယာ ,
တီဗှီ + စလောငျးစကျ – ၄၀၀ ဝပျ- ၁.၈ အမျပီယာ,
အဝတျလြှျောစကျ -၂၀၀ ဝပျ.. ဝ.၉ အမျပီယာ,
ရမေျောတာ – ၁၂၀၀ ဝပျ…. ၅.၂ အမျပီယာ
အဲကှနျး – ၁၂၀၀ ဝပျ….၅.၂ အမျပီယာ,
မီးသီး + မီးခြောငျး – ၁၅၀ ဝပျ… ဝ.၇ အမျပီယာ,
အိမျသုံးမီတာတဈလုံး၏ ခံနိုငျရညျ ဝနျအားသညျ (5/30) Amp. (10/30) Amp. အမြားဆုံး (၃၀) အမျပီယာထိ အသုံးခံနိုငျရညျရှိပွီး အထကျပါပစ်စညျးမြားအားတဈပွိုငျနကျ သုံးစှဲနပေါက( တဈနာရီလြှငျ) မီတာယူနဈတကျနူနျး
kilo watt per hour (Kw/hr)VI = W သညျ 230v x 30A = 6900 Watt=7Kw =7Unit. ဖွဈနေ၍ တဈရကျလုံး ပစ်စညျးပွုံသုံးခြိနျ တဈနာရီဆိုကတဈရကျလြှငျ (၇)ယူနဈဖွငျ့တဈလစာယူနဈ(၂၂၀) ဝနျးကငျြဖွဈမညျ။
သာမနျမိသားစုတဈလသုံးမီတာခ = ၅၅၀ယူနဈ အလှာမခှဲ တဈယူနဈ (၃၅) ကပျြဖွငျ့ တဈလနှဈသောငျးခနျ့ ကပြွီးကိုယျထူကိုယျထမီးလငျးရေးနယျပယျ တဈယူနဈ(၃၅၀)ကြ ပျဖွငျ့သုံးကတဈလ ကပျြနှဈသိနျးခနျ့ကမြညျဖွဈသညျ။
လကျရှိ အိမျသုံးမီတာအားမညျသညျ့ လြှပျစဈပစ်စညျးမြားသုံးနိုငျပွီးဝနျအားခံနိုငျရညျအမျပီယာ (သိုဝပျအားအခွအေနေ မညျမြှထိရှိနိုငျလဲဟု သိခငျြသူမြားအား ရညျရှယျရေးသားပါသညျ။
ယခငျကတပျထားသော(Analog) နဲ့ဒဈဂဈြတယျ မီတာတံဆိပျဟောငျးမြားတှငျ တောကျလြှောကျသုံး အမျပီယာ(၃၀) ထကျကြျောသုံးလညျး ဝနျပိုဒဏျကွေးရိုကျခံရမူမရှိပါ၊ အခနျ့မသငျ့က မီတာလောငျမှုမြားသာ ဖွဈတတျသညျ။
ယခု(၂၀၁၈)ခုနှဈ ဧပွီလမှစတငျအသဈထုတျပေးသော ဒဈဂဈြတယျမီတာအသဈ(ပုံပါတံဆိပျ)သညျသတျမှတျဝနျအား(၃၀)အမျပီယာကိုတောကျလြှောကျ တဈနာရီထကျ အခြိနျပိုမိုသုံးပါကယငျးမီတာနဲ့ ခြိတျဆကျထားသောရုံးထိုငျဆာဗာကှနျပြူတာတှငျ(Overload Error) ပွပွီးသတျမှတျဒဏျကွေး ရိုကျခံရမညျ ဖွဈသညျ။
မိမိအိမျ လစဉျ ယူနဈတှကျခကျြတတျပွီး…မီတာခ အနညျးအမြား ခြိနျဆနိုငျကွပါစေ။Thi Ha🇲🇲
မြန်မာကော်ဖီ မွှေးတယ်ဆိုပြီး ထိုင်းမှာရောင်းဖို့ ထိုင်း FDA ကိုစစ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ
“ကံကောင်းသူများသာ တွေ့ရှိနိုင်တဲ့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အန္တိမဈာပနာ...
လင်မယား ရန်ဖြစ်လို့ ဓါးနဲ့ခုတ်ရာမှ အိမ်နီးချင်း အမျိုးသမီးတွေပါ ဓါးဒဏ်ရာတွေရတဲ့...